Feo avy ao amin’ny Wiki · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Oktobra 2018 13:18 GMT
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Jolay 2005)
Iray amin'ireo fomba tsara indrindra hanaraha-maso ny wiki-antsika ny fanarahana ny pejin'ny “fanovana vao haingana”, izay amin'ny ankapobeny, mitanisa ny lisitr'ireo pejy 50 farany novaina tao amin'ny wiki. Isan'andro, dia spam na fandrobàna ny manodidina ny ampahatelon'ireo fiovàna ireo, manampy lisitra lava be ny olona, manantena hanatsara ny fandaharan'ny Google ny tranonkalany. (Manasa anao aho hanatevin-daharana ny ekipa kely mpiambina ny wiki izay manafoana amin'ny fomba vaovao ny spam ao amin'ny wiki – azafady mba jereo ity lahatsoratra mahasoa mikasika ny ady amin'ny fandrobàna ny wiki ity.)
Saingy matetika lasa fanampin'ny Bridgeblog Index, angona midadasika sy mitsaha-mitombo ahitana ireo bilaogera mpampita manerantany ireo fanovana hafa. Ary ny fanarahana ny pejy fanovana vao haingana (eny, afaka misoratra anarana ao amin'ny RSS ianao, raha tianao) dia ahafahanao mijery izay firenena nohavaozina vao haingana sy izay bilaogy nampidirina vao haingana.
Ho an'ireo izay tsy manam-potoana hidirana ao amin'ny wiki, hitsidika matetika ny sasany amin'ireo pejy wiki novaina vao haingana aho ary hanasongadina ireo firenena sy bilaogy ao amin'ny bilaogy Global Voices. Ireto misy santionany amin'ireo pejy mahaliana indrindra tamin'ny herinandro lasa:
Mamela antsika hahafantatra momba ny fitomboan'ny bilaogy Kambodziana tena tsara, amin'ny teny Anglisy, Frantsay ary Khmer ny namantsika ao Kambodza. Iray amin'ireo nozaraina be indrindra ny tranonkalan'i King Norodom Sihanouk. Tsy dia tena bilaogy – tsy RSS koa, saingy alamina amin'ny filaharana vanim-potoana mivadika ny fizarana “tahirin-kevitra isan'andro” ary toy ny bilaogy ny fahitako azy. Misy mihitsy aza ny karazana bilaogin-tsary – fandraketana an-tsary ireo asa isan'andro ataon'ny “Sa Majesté”. Azo lazaina fa mpankafy mozika i SM – maro amin'ireo lahatsoratra no manondro hira na dihy ho fanomezam-boninahitra azy, ary misy ny angon-kira nohirain'ny mpanjaka izay azo alefan'ireo mpiserasera Windows Media mivantana.
Antenaiko fa ny mpankafy ny Global Voices ny vahoaka ao amin'ny Cam-Blog. Somary mahazatra ny teny filamatr'izy ireo: “Ho an'ny namana rehetra, mamaky izao tontolo izao, vonona hanoratra ve ianao?” Ireo mpanoratra roambinifolo voatanisa ao amin'ny bilaogin'ny vondrona dia manome vaovao sy sary manerana ny firenena, ary koa lisitra mahasoa momba ny “Clogs”, blaogy Kambodziana.
Ny bilaogy Khmer-Girlz sy Khmer-Boyz no solontenan'ny tanora Kambodziana any ivelany (sy ao an-tanindrazana), izay maneho ny mombamomba sy ny rohy misy ireo blaogera tanora Kambodziana, indrindra any Frantsa, fa manerana izao tontolo izao ihany koa.
Nanampy an'i ThaRum, mpanoratra malaza ao Pnom Penh, aho ho an'ny milina mpanangom-baovaoko. Tsara vakiana ny lahatsorany vao haingana momba ny maha-zava-dehibe ny votoaty ao an-toerana amin'ny teny Khmer.
Miha-manankarena hatrany ny pejy wiki ao Arzantina, amin'ireo bilaogin-tsary marobe. Iray amin'ireo tsara indrindra ny “Buenos Aires: City of Faded Elegance” an'i Jeff Barry. Amerikana mpila ravinahitra i Jeff ary tena latsa-pitiavana amin'ny renivohitra Arzantina satria manao asa goavana amin'ny fizarana ny fientanentanany.
Ny Blog de Viages kosa dia bilaogy momba ny fitsangatsaganana amin'ny teny Espaniôla, mitantara ny dia mampientanentana sy ny fizahantany amin'ny ankapobeny any Amerika Atsimo. Ary amin'ny fomba fijery feno momba ireo Arzantiniana monina any ivelan'ny tanindrazany, mitantara ny “Argentinos desparramados por el mundo” (Arzantina miparitaka manerana an'izao tontolo izao) ny bilaogin'ny vondrona Argenauts.
Ny pejy manankarena indrindra ao amin'ny wiki angamba dia ny fampidirana an'i India, izay manasongadina bilaogy eo an-toerana amin'ny teny Anglisy, ny Diaspora Indiana, ny fanjakam-bilaogy Hindi, ary ny “Blog Directories and Cliques”. Misy amin-taonina azo trandrahana eto – ny vondrona bilaogy DesiPundit no fanombohana tsara, ary tena ilaina tokoa ny bilaogin'ny namako Dina Mehta.
Ireo sarobidy vao avy nampidirina:
- PolBlog – loharanom-baovao “24/7″ avy any Polonina, amin'ny teny Anglisy
– Taiwan Tiger – bilaogin-tsary mahafinaritra avy amina mpianatra mpila ravinahitra ao Taiwan.
– Angona rohy Tonizia mahafinaritra, anisan'izany ny Subzero Blue mavitrika foana, sy ny bilaogy amin'ny teny Frantsay an'ilay mpampiroborobo ny fahalalaham-pitenenana Neila Charchour Hachicha.
(Toa “naato” ny Subzero Blue – antenaiko fa vetivety ihany izany.)